ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: စစ်ကြေညာချက်
ပြည်ပကနေ အန်တီစုကို ဝေဖန်သံနေသူများကို “အန်တီစု ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်နေသလဲ” မေးခွန်းလို “ခင်ဗျားတို့ကော ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်နေသလဲ” လို့ မေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေး လူမှုရေးအင်အားစုတွေ၊ ကွန်ယက်တွေ၊ တတ်သိပညာရှင်တွေ အားလုံး အန်တီစုနဲ့အတူ၊ အန်အယ်ဒီနဲ့အတူ ဟန်ချက်ညီညီ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေကြတာ အများအမြင်ပါ။
nld က ခွဲထွက်ခဲ့ကြတဲ့ ndf လို အဖွဲ့မျိုး၊ ၀ံသာနု nld လို အဖွဲ့မျိုး၊ လမ်းပြကြယ် ဦးအေးမြင့်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး၊ ကိုအေးလွင်တို့လို၊ မြန်မာသံတော်ဆင့်က ကိုမြင့်ဆွေတို့လို လူတွေက အန်တီစုကို ဝေဖန်ပြောဆိုလာရင် သိတ်အံ့သြမိမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ဗုံမဟုတ် ပတ်မဟုတ် ပြည်ပကအသံတချို့ ကြွက်စီညံနေတာကိုတော့ မထူးပေမယ့် ဆန်းတယ်လို့ ကောက်ချက်ချရမှာပဲ။
ကြွက်စီညံနေတဲ့အသံတွေထဲမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အမှန်တကယ် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့ပြီး မလွှဲမရှောင်သာ ပြည်ပမှာလာနေထိုင်နေရသူတွေရဲ့ အသံတွေ မပါတာလဲ သတိပြုမိပါတယ်။ ဘာကြောင့် သူတို့အသံတွေ မကြားရတာလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ ပစ္ခက္ခအခြေနေကို သူတို့တွေ ကိုယ့်ထက် နားလည်လို့ပါ။ အန်တီစုဟာ လူထုအပေါ်၊ တော်လှန်ရေးအပေါ် သစ္စာမဖောက်ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်လို့ပါ။
ပြည်ပမှာရောက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာအများစု(အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ၊ ကိုယ်လဲပါပါတယ်)ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးအတ္တအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြသူချည်းပါ။ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရဖို့ အနစ်နာခံပြီး ပြည်ပမှာ တမင်ကလာ မနေချင်ပဲနဲ့နေနေရတယ်လို့ ဆိုချင်သူများရှိရင် စာရင်းပြုချင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်က၊ လေလှိုင်းပေါ်က တော်လှန်ရေးသမားများ ပြည်ပကနေ ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်နေသလဲ ???
Lwin Oo said...
ကို ကြီး ပေါ တ ကယ် ပေါ သွား ပီ
အဟက်.. အက်စစ်ကတော့ ထားပါတော့.. စထဲက ယဉ်သကိုဆိုသလို ဒေါ်စုကို ကျွန်တော်နဲ့ အပြိုင် နင်လားငါလား ဝေဖန်ခဲ့သူပါပဲ.. ဆန်းတာက ခုနောက်ပိုင်း ဒေါ်စုလုပ်ရပ်တွေ မကြိုက်လွန်းတာမို့ ဘာအပြစ်တင်ရမှန်း ကိုယ့်ဘာသာ ရှာမရတာတောင် တကူးတက သူများစာကို တင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ.ကြီးပေါရဲ့ ရှားရှားပါးပါး လုပ်ရပ်လေးပါပဲ.. ဘာတဲ့.. တစ်ထပ်ထဲတောင် ကျတယ်ဆိုပဲ..
ကိုပေါဟာ လူအစွဲမထားပဲ လုပ်ရပ်အပေါ် ဝေဖန်တတ်သူလို့တော့ တစ်ပိုင်းတစ်စ လက်ခံပါပီ.. တပိုင်းတစဆိုတာက တစ်ယောက်သောသူကို ခြွင်းချက်ထားလို့ပါပဲ.. အဲဒီလူက ကိုပေါပဲ.. သူတွေးသမျှ.. သူ့သဘောနဲ့ မကိုက်သမျှဟာ ရလဒ်ဘာရှိရှိ မှားတယ်.. သူသဘောကျရင် ရလဒ်ဘာရှိရှိ အရေးမကြီးတော့ပြန်ဘူး.. မှန်တယ်ဖြစ်သွားရော.. သူစဉ်းစားတဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ ထပ်တူကျရင် အဲဒီလူကို (ဘာမှမလုပ်ထားလဲ) ဗလိုင်းကြီးကို မြှောက်ပင့်မယ်.. သူစဉ်းစားတဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ မကိုက်ဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်လုပ် ဘယ်လိုကိုက်ရမလဲဆိုတာကို (အံ့သြောစရာကောင်း လောက်အောင်ကို) မျက်စိဒေါက်ထောက် အပစ်ရှာနေတာဗျ.. ဟားဟား.. အဲဒီလူကို ခြွင်းချက်မထား ပစ်တင်ဝေဖန်ပါဦး ဆရာ.ကြီးပေါကို သတိပေးချင်ပါရဲ့..
စဉ်းစားကြည့်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လူထုအုံကြွမှုကမှ အာဏာရှင်ကို မနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာ အကြိမ်ကြိမ် သက်သေ ပြခဲ့ပြီးတာတောင် လမ်းဟောင်းကို စွဲကိုင်ထားချင်သေးတဲ့ ငါ့ယုံကြည်ချက်ဟာ မှန်ရဲ့လားလို့ သုံးသပ်ကြည့်ဘူးပါရဲ့လား.. သူအခု စမ်းသပ်တဲ့ လမ်းကြောင်းကရော မမှန်နိုင်ဘူးတဲ့လား.. အရင်တုန်းကမှ မယုံရတာ အမှတ်မရှိသေးဘူးလား ဆိုရင်တော့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တာလဲ အရင်တုန်းကမှ မနိုင်တာ အမှတ်မရှိသေးဘူးလား ပြန်မေးရုံပါပဲ.. ရီရတာက ကိုပေါရဲ့ အရင်ဆောင်းပါးတွေမှာရော ဒီဆောင်းပါးမှာပါ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ပြည်သူကို ပွင့်လင်းရမယ် ဘာညာကွိကွ ဖလော်ဆော်ဖီကြီးတွေ.. ပွင့်လင်းသင့်တဲ့ နေရာမှာ ပွင့်လင်း.. လျှို့ဝှက်သင့်တဲ့ နေရာမှာ လျှို့ဝှက်လေ့ ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောတရားတောင် နားမလည်ဘူးတဲ့လား.. ပွင့်လင်းမှုမရှိရင် ပြည်သူတွေက လက်မခံပါဘူးတဲ့.. သိပ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ဖလော်တွေပါ.. တကယ့်လက်တွေ့ ကရောဘာလဲ.. ကော်မန့်တွေပဲ ကြည့်ပါဦး.. ဒါက မြန်မာတွေ မို့လို့ပါ ဆိုပီးမပြောနဲ့ ကမ္ဘာတောင် ဒေါ်စုဘာမှမလုပ်ပဲကို.. ဘာလုပ်မှန်း မသိပဲကို စွပ်စက်ထောက် ခံနေလို့ မောင်သတိညစ်နေတာ ကြာလှပေါ့ဗျာ..
ကျွန်တော့အမြင်တော့ ဒေါ်စု ခုအန်အယ်ဒီမှတ်ပုံတင်မယ် ဆုံးဖြတ်ရင်တောင် ရဲရင့်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲ.. ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး ဗလောင်းဗလဲ ပြောသလိုဖြစ်မယ်.. (အဟက်.. ကိုပေါ စင်ပေါ်တင်ကထဲကိုကလဲ ခုတမျုိုး တော်ကြာ တမျိုးက သူပြောနေကျပါပဲ.. အဲဒီတုန်းကလဲ ကိုပေါခမျာ ဖလော်မျိုးစုံသုံးပြီး ကာကွယ်ရရှာတယ်..) ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်.. မမှားတဲ့လူ မရှိဘူးဆိုတာ ကိုပေါတို့ အသံကောင်းဟစ်ပြလေ့ရှိတဲ့ ဖလော်တစ်ခုပါ.. ကဲ ကိုယ့်လုပ်ရပ် မှားမှန်း.. ဒါမှမဟုတ် အကျိုးမသက်ရောက်မှန်း သိပြီးဆိုပါတော့.. ဘာလုပ်မလဲ.. မှားပစေတော့ မထူးဘူး ဆက်ပေါမှာပဲ အဲ.. ဆက်မှားမှာပဲ လုပ်မလား.. ပြင်မလား.. ဒါဟာ ဗလောင်းဗလဲဆိုရင် အဲလို ဗလောင်းဗလဲမျိုးတော့ လုပ်စမ်းပါဗျာ.. ထောက်ခံပါရဲ့.. ခုဒီနေ့ ဦးသိန်းစိန် မြစ်ဆုံကိစ္စ တရုတ်နိုင်ငံကို ဗလောင်းဗလဲ လုပ်ရသလိုပေါ့..
ချုပ်ရရင်တော့ သူ့လမ်းကြောင်းကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် မကြိုက်ကြောင်း လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခွင့်ရှိပါတယ်.. အမြင်မတော်ဘူး ထင်ရင်လဲ ပြောပစ်လိုက်လို့ ရပါတယ်.. (တချို့လုပ်ရပ်တွေ တကယ်မှ အမြင်မတော်တာ..) ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ခုကိုပေါ လုပ်နေပုံမျိုး မဟုတ်ဘူး.. ထောက်ပြဝေဖန်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ မျက်စေ့ဒေါက်ထောက်ပြီး ပုတ်ခတ်တာဖြစ်နေတယ်.. ပုတ်ခတ်တဲ့ စာတွေ အားရ၀မ်းသာ လိုက်ရှာတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်.. ငါပဲမှန်တယ် နင်မှားတယ်ဆိုတဲ့ ဇွတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်.. ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်စုတွေ့တာ ဘယ်နှစ်ရက်ရှိပါပီ ဘာညာကွိကွ count down လုပ်ပြီး ရလဒ်ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဆရာ.ကြီးပေါခင်ဗျား.. အဲဒါကို အကိုအရင်မလုပ်ထားဖူးတဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ် အချိန်က ရလဒ်နဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ယှဉ်ချပြီး ခပ်ရဲရဲ သုံးသပ်စေချင်ပါကြောင်း..
“အန်တီစု ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်နေသလဲ” မေးခွန်းလို “ခင်ဗျားတို့ကော ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်နေသလဲ” လို့ မေးချင်ပါတယ်။ (ဒါ ပါမှပါပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်လိုက်ရတာ။)
Today, I got quite different feeling by ko Lwan Swe blog filled with disappointed arguments while univocal comments in EMG for Myitson Dam stoppage news.
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သတင်းစာဆရာကြီးများ၊ တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားသူများ၊ ပြည်သူများအားလုံးက လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Nga Muu Thouk Paw
ခင်ဗျားဟာ ကလိတဲ့နေရာ၊ ထေ့တဲ့ ရိတဲ့နေရမှာတော့ အတော်လေး လက်စွမ်းထက်ပါပေမယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်တကယ် ဗျူဟာကျကျ သုံးသပ်နိုင်စွမ်း ဒီလောက်အားနည်းမယ်လိမ့်တော့ ထင်မထားမိဘူး။
ဗျူဟာတခု၊အမြင်တခု မှန်သည်ဖြစ်စေ၊မှားသည်ဖြစ်စေ အဲဒိကိုသုံးသပ်ပြတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အာဘော်ပါရုံနဲ့ သူများပြောသမျှ လိုက်ထောက်ခံနေရတဲ့အထဲ ကိုပေါပါနေတာကတော့ အတော်အံ့သြမိတယ်။ အစကတော့ ခင်ဗျားဟာ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ် သီးသန့်အမြဲတင်ပြရေးသားနေသူလို့ ထင်ထားခဲ့တာ၊ နောက်ဆုံးတော့ ခင်ဗျားလဲ အရောင်တူရာ သူချင်းအုပ်စုအတင်းဖွဲ့ ပြီး ရောတိရောရာ ယိမ်းဝင်ကတတ်သူဖြစ်နေပြီ။
အရင်က ဒေါ်စုနဲ့ NLD က အစိုးရ (အရင်စစ်အစိုးရ၊ အခုလက်ရှိ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရ) နဲ့ စကားပြောဖို့ တောင်းဆိုကမ်းလှမ်းနေကြတုံးက ကိုပေါတို့လို လူတွေအပါအ၀င် အားလုံးသော အတိုက်ခံတွေက Dialog ဖြစ်ဖို့အရေး အားပေးထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။
ဟော အခု Dialog အဆင့်ကို ခပ်သွက်သွက်ကျော်ဖြတ်ပြီး သဘာတူညီမှုတွေ တစ်စုံတစ်ရာရချိန်ကျမှ ခင်ဗျားတို့တတွေက ဘက်ဂီယာထိုးပြီး ဘာစကားတွေ ပြောနေမှန်း ငါတို့မှမသိတာ ယုံနိုင်စရာလား လုပ်နေတယ်။ သဘောပေါက်ထားဖို့က ဟိုဖက်မှာကလဲ သမတ အပါအ၀င် တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲမှု လိုလားသူတွေ ဟာ သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ လုပ်လို့မရသလို၊ ဒီဖက်မှာလဲ ဒေါ်စုတစ်ယောက်တည်း ထင်ရာကျဲ လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ နှစ်ဖက်လုံး risk တွေယူပြီး စကားပြောဖြစ်တဲ့ အချိန်ကျမှ ဒီစကားတွေ ကျုပ်တို့မှ မသိရရင် မယုံနိုင်ပါဘူးလုပ်နေတာဟာ၊ အဖေဘယ်လောက်ဝင်ငွေရှိနေမှန်းမသိပဲ အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိ တန်ဖိုးကြီး အရုပ်မရရအောင် ၀ယ်ခိုင်းနေတဲ့ကလေးဆိုးတွေလိုပဲ။
ဘာတွေ ပြောကြဆိုကြတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်မသိရလို့ မယုံမကြည်ဖြစ်နေကြတဲ့ ခင်ဗျားတို့က လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ ရလာဒ်တွေအပေါ်လဲ အသိမှတ်ပြုဟန် မတူပြန်ဘူး၊ မျက်လုံးစုံကန်းနေသူတွေလိုပဲ။ ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေကို အသိပေးရမှ တကယ့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတာကို လူတွေလက်ခံမယ်လိုလို ဘာလိုလိုပြောနေကြပေမယ့် တကယ်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ပြည်တွင်းက ဘယ်အင်အားစုကမှ အခုအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေအပေါ် အယုံအကြည်ကင်းမဲ့မှုလေသံနဲ့ ဝေဖန်နေသံမျိုး မကြားရပြန်ဘူး။
ခင်ဗျားတို့ ဝေဖန်သံတွေထဲမှာ သိပ်ကလေးကလားဆန်နေတာတွေကတော့.. ၁)ဒေါ်စုဘောပွဲကြည့်တာဟာ သူ့ရဲ့ cause ကို သစ္စာဖောက်သွားသယောင် ပြောနေကြတာ ၂) နှစ်ဖက်လုံးအတွက် အချိန်မရေးနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားနိုင်တဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့ issue တွေကို ဘဏ်မှာ ငွေသွားချေးတဲ့ သူကို ဘဏ်က အသေးစိတ်မေးမြန်းတာတွေ ဖြေမှ ချေးငွေထုတ်ပေးနိုင်မယ့် အလား သဘောထားနေကြတာတွေ ၃) ဒိုင်ယာလော့ကို တောင်းထားသူ အခု ဒိုင်ယာလော့ရတော့ အခြား နည်းလမ်းနဲ့ လမ်းကြောင်းရှည်ပေါ်တွန်းတင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေ စတဲ့ လမ်းကြောင်းဟောင်းတွေကို ဆက်လက်ဖက်တွယ်ဖက်နေကြတာကိုပဲ မြင်နေရတယ်။
တစ်ဖက်ကနေလဲ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒ၊ ဗျူဟာတွေကို ချပြကြအုံးလေဗျာ။
၁) ဒေါ်စုကို အစဉ်အမြဲပဲ အစိုးရဆိုသူတွေကို အတိုက်ခံလုပ် နပမ်းလုံးနေတာကိုမြင်ချင်တာလား။
၂) အရင် စစ်အစိုးရရဲ့ မတရားမှုတွေအတွက် သူတို့ကို ကလဲ့စားချေ တုံ့ပြန်နိုင်မှ နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲ လို့မြင်မှာလား
၃) အပေါ်က ၂ခုကိုလုပ်နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းကိုမှ တကယ့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ထားကြတာလား
၄) အစိုးရ အပြောင်းအလဲ လုံးဝဖြစ်သွားမှ (ဥပမာ လက်ရှိကြံ့ဖွတ်အစိုးရမှ ဒေါ်စု သို့မဟုတ် အခြားခင်ဗျားတို့ ထောက်ခံတဲ့ အင်အားစုအာဏာရသွားမှ) ဒီမိုကရေစီ ရမယ်ထင်နေတာလား
၅) လက်ရှိ စစ်အုပ်စု ကျောထောက်နောက်ခံ အစိုးရပြုတ်ကျသွားရင်ရော တကယ် ဒီမိုကရေစီ ရပြီလို့ ထင်နေလား
၆) ထောင်ထဲက ကျုပ်တို့ ရဲဘော်အစစ်တွေ လွတ်လပ်စွာ ထွက်လာနိုင်ဖို့ ခင်ဗျားတို့ လိုချင်တဲ့ အထက်က အချက်တွေ အကောင်ထည်ပေါ်လာတဲ့ အထိစောင့်နေရမှာလား
၇) တိုင်းပြည်ရဲ့ လတ်တလော လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေကို ခင်ဗျားတို့ လိုချင်တဲ့ အခြေအနေရောက်မှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာလား။
၈) ပြည်သူလူထုဖက်က ပေးဆပ်မှုအနည်းဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးအမြတ်စွန်းကိုရဖို့ ဘယ်နည်းလမ်းဟာ အကောင်းဆုံးလို့ ခင်ဗျားတို့ ယုံကြည်သလဲ။ခင်ဗျားတို့မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းရှိသလား။
၉) ခင်ဗျားတို့ ယုံကြည်တဲ့လမ်းကြောင်းဟာ တိုင်းပြည်အတွင်းက majority stakeholders တွေ အကုန်လက်ခံနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါ့မလား
အထက်ပါ အချက်များကို ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်ပါရစေ။
ဒါတွေကို ပြေလည်အောင် မရှင်းလင်းနိုင်ပဲ ကလိလိုက် ထေ့လိုက် လုပ်နေရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားလဲ ကပ်ပိယ ကံကောင်း၊ ကျေးစေတမန် တို့နဲ့ ထူးမခြားနားတဲ့ radical တစ်ယောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
စင်္ကာပူမှာလည်း ပီအာက ထပ်တိုလို့ မရ.... မြန်မာပြည်ပြန်ရင်လည်း လုပ်ရပ်တွေက မမှန်တော့ အဖမ်းခံမှာ စိုးရိမ်ရ.. အန်တီစု နဲ့ ဦးသိန်းစိန် တို့က ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနေပြီဆိုတော့ အမေရိက အော်စီတို့က ရီဖြူဂျီလဲ မပေးတော့ ဆိုတော့ မင်းသားက မကရတာနဲ့ ပတ်မကြီးကို ထိုးခွင်းမယ် ကြံရွယ်နေသူ ကိုပေါလို့ပဲ ပြောလိုက်ချင်တဲ့။
ဆရာကြီး စင်္ကာပူဒီမိုကရက် ချီဆွမ်ချမ်း လမ်းစဉ်လိုက်တာပေါ့။ အောင်မြင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို အပုပ်ချ သိက္ခာကျအောင် လုပ်ဖို့လောက်ပဲ တတ်တော့တယ်။ ချီဆွမ်ချမ်းက စလုံးမှာလို့ နေလို့ရတာ ကိုပေါတို့က အပေါ်လဲ မရောက် အောက်လဲ မရောက်ဆိုတော့ ဇော်ကန့်လန် ဖြစ်တော့မှာ မြင်ယောင်သေး...
"အန်တီစု နဲ့ ဦးသိန်းစိန် တို့က ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနေပြီဆိုတော့ အမေရိက အော်စီတို့က ရီဖြူဂျီလဲ မပေးတော့"
I see why Ko Paw is dead against
Daw Su and new reforms in Burma.
I thought Ko Paw is an engineer,
a professional but I learn that
he may beanew bum in the queue.
Well, there still are issues he
can apply for refugees, such as
beingagay, or non Buddhist- he
can shout that Burmese Buddhists
including Daw Aung San Su Kyi are
discriminating him for his faith.
Good luck for your relocation!
မင်းရဲ့ လမ်းစဉ်က ဘာလဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည် အချုပ်ထဲကျနေမှ မင်းက နေထိုင်သာ ရှိတာလား။
တပြည်လုံးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီး စစ်တပ်က အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်မှ မင်းက ကျေနပ်မှာလား။
ပြည်သူတွေငတ်ပြတ်နေမှ မင်းက ပျော်မှာလား။
ခင်ဗျားဘာလုပ်လုပ် ၀င်ထောက်ခံမယ့် အိမ်ပွဲစားလေး (Soe Tun) ကို နှိုးလိုက်ပါဦး။ ငါ့ကိုဝိုင်း ဆောက်ကုန်ကျပြီလို့ 
ဒီလိုစာမျိုးကိုတင်ပြီး ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ Nga Paw
ဘလော့ကိုလည်း တော်တော် ရွံရှာ မိတယ်...
I thinking after this post that if our country have many Daw Aung San Suu Kyi, we can get Democracy or if we have many Acid,poster,and Ko Paw,blogger, we can get Democracy?
I remember that the words " Dogs are barking but curts still on going".
Who is that အိမ်ပွဲစား Soe Tun?
ကျော ချ ရင် ဒါးပြ တဲ့
ဒီတခါ ကျော ချ သွား တာ
ဒါး ပြ မဟုတ်ဘူး
ဒို့် ဗိုလ် ချုပ် အောင်ဆန်း ရဲ့ သ မီး
အောင်ဆန်း စုကြည် ။
လေ လည် ရင်
ဘာ ကျယ် လဲ မေး နဲ့
စု နိုင် မှ ချမ်းသာမယ် တဲ့
ဒို့် တ တွေ မချမ်းသာ ခဲ့ ပေမဲ့
မေတ္တာ ပို့် မ ပျက်ပါဘူး
တ ခါ မှားဖူး တဲ့ အရိုင်း စု လေး အတွက်
ဒို့် ပြည်သူ အချစ် နဲ့ အရာရာ အကောင်း အတိုင်း ဖြစ် ခဲ့ တယ် မဟုတ်လား ။
စု လေး တို့ တူး တူး ခါး ခါး ဖြစ်ပုံများ
ဘူး ဆို ဖယုံ မသီးဖူး ဆို ဘဲ
မရိုသေ့ စကား နောက်ဖေး များ သွား ရင် တောင်
ဘူ ဖြစ်မှာ စိုးလို့ အောင့် တောင် ညှစ်ပါသတဲ့
ဘူး ဆို တာ လူတိုင်း ကြားအောင် ။
ပီယ၀ါစာ ချစ်ဖွယ်သော စကား ထပ် ကြားစေတာ က
ကျမ ကို ချစ် တဲ့ ပြည်သူတွေသာ အသိ အမှတ် ပြု ရင်
ရုူံး တောင် မလိုပါသတဲ့
'ကျွန်တော် နဲ့ ကိုဘကျော် ' ဇာတ်ကား ထဲ က
Dialogue တွေ အတိုင်း ။
နှစ် ၂၀ ပစ်ခွါခဲ့တဲ့ ကိုဘကျော် က
ချောင်း ဟန့်သံပေးရုံနဲ့
ဒီတခါ သူ ကြင် နာ ကောင်း ရဲ့ ဆို ပြီး
လိုက် ပြေး မယ် ပြင်တဲ့
အကယ်ဒမီ လေထွားစုကြည် ။
to anonymous@October 1,2011 11:12AM
Shame on you! You ain't even worth to eat even the shit of my leader,
Daw Aung San Su Kyi.
Do you or did you haveamother?
A street slut who got gang banged
byabunch of mental retards led
to your existance and right after
birth she left you at an orphange?
You pathetic cock sucking faggot!
ပေါဂျီး က စလုံးမှာလဲ လုပ်စားလို့လဲမရ၊ တောင်းစား ဖို့ကြတော့လဲ စလုံးအစိုးရ က သူတောင်းစား လိုင်စင် ချမပေးတော့ ဝက်ရူးရောဂါ ထလာပြီး တိ၊မွေး၊ကု-လွဏ်းစွေ (paw gyi's family doctor)၊ AIDS ရောဂါ သယ် အက်စစ် တို့နဲပေါင်း ပြီးတော့ (လ၊ပ၊အ) ပါတီထောင်တော့ မယ်နဲတူတယ်။
Totally agree with Jackel... thaks for your comment.
Absolutely agreed with you ....
you know what ...now is the time we have to focus on the Unity...You still can say that "I am just saying my opinion and in the democratic, I have the right to say what I think is right."
I think you are fully aware that our country's politic is always ended up divides. Starting from YMBA/GCBA --> Pha-sa-pa-la/Communists--->NLD/NDF, they all went up with divides. which makes them weaker & weaker ,and the enemy got more chances to win.
Well, bear in mind that Unity is very important whether NLD decides to register or not, and this Unity is the only weapon whereby dictators are really afraid of. I hope you fully aware of it
မိတ်ဆွေရဲ့ ကွန်မန့်ကိုဖတ်ပြီးချိန်မှာ နေ့လည်လောက်က ကျွန်တော့် ကွန်မန့် ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုခု မှားယွင်းသွားတယ် ထင်ပါတယ်။ ကွန်မန့် မရှိတော့ဘူး။ နောက်မှ ပြန်စစ်ကြည့်ပါ့မယ်။
လောလောဆယ်တော့ ကိုပေါရဲ့ သဘောထားနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ သဘောထား မတူပါဘူး။
ယခုအချိန်ထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တစ်ချို့ဝေဖန်ကြသလို တိုင်းပြည်ကို သစ္စာဖောက်၊ ကိုယ်ကျိုးရှာသူလို့ လုံးဝ မယူဆပဲ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဖြစ်သင့်/ဖြစ်ထိုက်/ဖြစ်နိုင်သော နည်းလမ်းတွေကို အမြဲ ဦးစားပေးပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ဆဲပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Jackel ရေးတဲ့ သဘောတရားတွေ၊ ယူဆချက်တွေကို လုံးဝ သဘောတူပါတယ်။
I was really impress about your blog. You should have stop what you are doing. We really understand that you did expect too much on Daw Aun San Su Kyi and you might not wanted to accept current situation. I noticed that you always say you have the right to express what you really believe. You should have think all your act and words as well. We should not circulate and follow the steps what was happend in last six decades over. I am pretty sure you areagood father andagood husband for your family, so please be kind and understand to others as well go for solution do not go for arguing.
funny ko paw, anyway you can be more infamous by criticizing daw aung san su kyi of burma. good luck and all the best bro!
ဟီး ဟီး မဆိုင်ဂလိုင် ခေါက်လိုက် အုန်းမယ် လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် က ခဏတဖြုတ် တက်ကြွဘူး တဲ့ မသုံးလုံး နဲ့ ကောင်လေးကို ငယ်ပေ မယ် အရမ်းလေးစားပါတယ် ဆို အခုကော ???
အဲ ကောင်လေး ဆို စလုံးမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပီး ပြောက်တွားလိုက်ဒါ ကိုပေါ (အောင် နိုင်မိုး) နဲ့ တဖွဲ့ထဲလေ သောက်လိုက် စားလိုက်နဲ့
ထူး အိမ်သင် တချင်းလေး " ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ မင်းကို ဒို ဘယ်လိုမှ နားမ လည်" ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာ ၂၀၀၈ ပါ။
သူ ပျောက်မသွားပါဘူး။ ကျောင်းပြီးလို့ ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ စင်္ကာပူမှာ နေသွားပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုပြောပါမယ်။ လူများစုကိုကိုယ်စားပြုတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ခုကြံ့ဖွတ်အစိုးရ သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်တာတွေခဏထားပြီး စိတ်သဘောထားချင်းတူတဲ့ကိတ်စတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြတာဟာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလို့မြင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ စစ်အစိုးရတစ်ဖြစ်လဲ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရအပေါ်မှာ အခါခါခံထားဖူးကြပြီးပြီမို့ သံသယကြီးမားနေပြီး အယုံအကြည်မရှိတဲ့အမြင်ကိုလည်း နားလည်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ သံသယကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေ အယုံအကြည်မရှိတဲ့အဖွဲ့တွေဟာ အဲ့ဒီသံသယတွေ အယုံမကြည်ရှိမှုတွေကို အစိုးရအပေါ်မှာပဲထားပြီးတော့ လက်ရှိဖြစ်စဉ်တွေကိုအကောင်းမြင်နေတဲ့သူတွေကို မတိုက်ခိုက်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသွားချင်နေတာ ပြည်သူ့အာဏာဟာအစိုးရပေါ်သက်ရောက်ရေးပဲမဟုတ်လား။ ဘာလို့ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေမှာလည်း။ အစိုးရကိုဖိအားပေးတဲ့သူကပေးမယ်။ ကောင်းတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်အမှတ်ပေးတဲ့သူကပေးမယ်။ လူတိုင်းဗျာ ကောင်းတာလုပ်လို့ချီးကြူးခံရရင်လုပ်ရတာပိုအားရှိတယ်။ ထပ်ထပ်ပြီးအချီးမွန်းခံရအောင် ကောင်းတာတွေထပ်ထပ်လုပ်မယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ မြစ်ဆုံကိတ်စရပ်တန့်လိုက်သလိုမျိုး ကောင်းတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာ ကြိုဆိုရမှာပဲ အားပေးရမှာပဲ။ မဟုတ်ရင် ကောင်းတာလုပ်လည်း ဆဲခံရ ဆိုးတာလုပ်လည်းဆဲခံရဆို သိပ်မနှိပ်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အမှတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့က တစ်မှတ်ချင်းတိုးပေးပြီး မော်တီဗိတ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်သလို သံသယရှိနေသေးသူများကလည်း လူလည်ကျလို့မရအောင်မော်နီတာလုပ်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းချင်းမတိုက်ခိုက်ကြပါနဲ့တော့။
ဝါးဟားဟားဟား ... လူထုကိုလမ်းပေါ်ထွက်စေချင်တဲ့ အက်စစ်၊ အဲဒါကို တစ်ထပ်ထဲ သဘောထားညီမျှလို့ ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုပေါ ... ရန်ကုန်ပြန်ပြီး လမ်းပေါ်အရင်ထွက်အော်ပြပါဗျို့၊ ရှစ်လုံးနဲ့ မင်းအောင်လှိုင်တို့ ဘာမှမလုပ်ခင် ပြည်သူတွေဝိုင်းဘေတာ ခံရမှာ မြင်သေးတယ်။
ကိုစိုးထွန်း(October 2, 2011 12:05 AM)
ဒီနေ့မနက်မှ ကွန်မင့်တွေရော၊ ပီအမ် မက်ဆေ့ခ်ျရတဲ့အတွက်ရော ကွန်မင့်တွေကို ပြန်စစ်တော့ ကိုစိုးထွန်းရဲ့ ၁၂း၀၅ မှာ “ပထမကွန်မင့် ပျောက်နေတဲ့အကြောင်း ရေးထားတာကို မြင်ရပါတယ်”။
ဒီအတွက် ကျနော့်ရဲ့ ဂျီမေးလ်ထဲမှာ ကွန်မင့်တွေကို ပြန်ရှာကြည့်တဲ့အခါ ကိုစိုးထွန်းရဲ့ ပျောက်နေတဲ့ ကွန်မင့်ကို ရှာတွေ့တဲ့ အလျောက် အောက်မှာ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ဟာ ကွန်မင့်တွေကို ဖျက်လေ့ဖျက်ထ ရှိသူမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုစိုးထွန်းရဲ့ ကွန်မင့်ကို ဖျက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီပို့စ်ကို တင်ကတည်းက အမြင်မတူတဲ့ ကွန်မင့်တွေ လာလိမ့်မယ်လို့ ကြိုတင် မျှော်လင့်ထားတဲ့အတွက်ပါ။ ဘာကြောင့် ဒီကွန်မင့်ပျောက်သွားသလဲဆိုတာတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရ ဖြစ်နိုင်ချေကို ပြောရရင်ဖြင့် အခြားတစုံတယောက်နဲ့ ကွန်မင့်ကို တပြိုင်တည်းလောက်တင်ရင် တခါတလေမှာ ကိုယ့်ကွန်မင့်မတက်တာကို ကြုံဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါ်ပြီးမှ ပျောက်သွားတာမျိုးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်အတော်ကြာက ဘလော့ဂါဒေါ့တ်ကွန်းမ် မှာ ပြဿနာတက်စဉ်က အချို့ ကွန်မင့်တွေ အတော်များများ ပျောက်တာကြုံဖူးပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အောက်မှာ အီးမေးလ်ကနေ ကူးယူပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စိုးထွန်း has leftanew comment on your post "စစ်ကြေညာချက်":
“Anonymous ... October 1, 2011 8:13 AM အနေနဲ့ သတိထားမိရင် သိနိုင်မှာပါ။ ကိုပေါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးတဲ့ပို့စ်တွေမှာ ၀င်ရောက် ထောက်ခံခြင်း တစ်ခုမှ မရေးခဲ့ဖူးဆိုတာ။
အခုကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော့်နဲ့ ကိုပေါရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ခြင်း မတူပေမယ့် တစ်ခြားသူတွေ ရေးသားကြသလို ကိုယ်ကျိုးအတွက် ရေးသားဝေဖန်ခြင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်လို့ရယ်၊ သူရဲ့လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ရယ်ကြောင့် ဘာမှ ၀င်ရောက် မဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့သူချင်းမို့ သူ့ဘာကြောင့် ပြောဆိုဝေဖန်နေသလဲဆိုတာကို နားလည်ခံစားမိတာလည်း ပါ၊ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယခုအချိန်ထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်သူလူထု ကောင်းကျိုးအတွက် ဖြစ်သင့်၊ ဖြစ်ထိုက်၊ ဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်းတွေကို အမြဲ ဦးစားပေး စဉ်းစား ဆောင်ရွက်နေဆဲလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ကြတဲ့ အခြားနေရာတွေမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ယုံကြည်မှု၊ ထင်မြင်ချက်ကို ကျိုကြား ကျိုကြား ရေးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြုသဘောမျိုး ဝေဖန်တာကို လက်ခံနားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် သစ္စာဖောက်လို၊ ကိုယ်ကျိုးရှာသမားလို ပြောဆို ဝေဖန်ချက်ကိုတော့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
People below will share your feelings too.
ထိုဘုပြောထားသောစကားများကို က မှ အ အထိပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသောအလုပ်သည်ပို၍လွယ်ကူပါ၏။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းမှုကြောင့်ဘီလူးက ကတော့မယ့်ကိုတရုတ်ကြီးကိုအကြောင်းလဲနဲနဲပါးပါး ရေးပေးပါအုန်း။
ကျွန်တော့် ကွန်မန့်ကို ကိုပေါဖျက်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ တစ်ခုခု မှားယွင်းတယ်လို့ပဲ ယူဆခဲ့တာပါ။
ကိုပေါအနေနဲ့ ကွန်မန့်တွေကို လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက် မရှိပဲ ဖျက်လေ့မရှိတာ ယုံကြည်ပါတယ်။
အခုကိစ္စကလည်း ကျွန်တော့်အမှား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကွန်မန့်ရေးနေတုန်း Main page ကို မတော်တဆ ပိတ်မိသွားလို့ ပြန်ဖွင့်လိုက်ပေမယ့် ကွန်မန့်ရေးတဲ့ page က ပထမ Main page ရဲ့ဟာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် Save လို့ ပြလိုက်လို့ အဆင်ပြေတယ် ထင်ပြီး အချိန်မရလို့ သေသေချာချာ ပြန်မစစ်မိလိုက်ဘူး။
အလုပ်ရှုပ်သွားစေတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ :)
ကိုစိုးထွန်း.... အခုလို နားလည်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျိုး။
Have you been receiving the supporting money???
Have you ever thought to return to Burma???
Maung Nyo's Uncle
လေးစားခဲ့ရသမျှ သွားတာပါပဲ။ ဒေါ်လာစား တွေ ခွက်ပျောက်လို့ တောရေး တောင်ရေး ကိုတော့ နားလည်ပေးလို့ရပေမယ့်...ကိုပေါ က ဘာခွက်ပျောက်မှာ စိုးလဲဆိုတာတော့ နားမလည်ဘူးဗျို့။
ဒေါ်စု၊ အမေစု၊ အဘွားစု ... စုကိုထိလို့မရပါလား
ကိုပေါ, ခင်ဗျားပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်နေသလဲ”
To Anonymous October 3, 2011 2:44 PM who said ' ဒေါ်စု၊ အမေစု၊ အဘွားစု ... စုကိုထိလို့မရပါလား'
Yes because Daw Aung San Su Kyi is our leader. You can ask your mother to bend over the edge of the table
and bang her. I can help you too!
စာတွေ ဖတ်သွားပါတယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်း ကိုယ်လျှောက်သွားကြရမှာ လူသားတိုင်းပါပဲ။ မှားတယ်၊ မှန်တယ် ဆိုတာ အချိန်က အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာပါပဲ။ အဓိကကတော့ ကိုပေါလို ကိုယ် ယုံကြည်ရာကို ရေးချပြရဲတာ ချီးကျူးပါတယ်။ လူသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်နိုင်ခွင့်တော့ ရှိသင့်ပါတယ်။
မျက်စိတစ်ဆုံးမကြည့်ဘဲ မျက်တောင်တစ်ဆုံးကြည့်တယ်လို့ ပြောရင်တောင် ကိုပေါတို့မျက်တောင်က တိုလွန်းပါတယ်ဗျာ...။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို မှားတယ်လို့ ထင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တောင် အရင်လုပ်ခဲ့တာတွေကို ထောက်ခံခဲ့ လက်ခံခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလို အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စော်ကားမှုမျိုးဆန်တဲ့ စာတွေ မရေးသင့်ပါဘူး..။ မမျှဝေသင့်ပါဘူး..။
လူသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်နိုင်ခွင့်တော့ ရှိသင့်ပါတယ်။
nga paw.. nga paw.. u r so nga paw.. i predicted u to beanga paw many years ago.. now that comes true.. so happy.. ;D
i know him he isaradical since many years ago..
>>ခင်ဗျားလဲ ကပ်ပိယ ကံကောင်း၊ ကျေးစေတမန် တို့နဲ့ ထူးမခြားနားတဲ့ radical တစ်ယောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကိုပေါတို့ဟုတ်မလိုလို နဲ့ ဘါမှ မဟုတ်ဘူး ဆိုတါ အခု မှ တွေ့တေါ့တယ်
ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နဲ့သစ်ကိုင်း တေါ့ မလွတ်စေနဲ့ ပေါ့